nebugagu betemibhalo asetshenziswa kabanzi ngaso sonke isikhathi, hhayi kuphela zabuna, noma abalobi imisebenzi yobuciko, kodwa futhi ukumaketha, izimbongi, futhi abantu ngisho abavamile ukuba licace kabusha indaba batshelwa. Ngaphandle kwawo angabuyeli engeza ukuphi e temibhalo yephrozi netindzaba, izinkondlo noma sipho ejwayelekile, bona ukuhlobisa bese uvumele uzizwe ngokunembile lokho ayefuna ukusibonisa yemlandzi.
Noma yimuphi umkhiqizo, kungakhathaliseki ubukhulu bawo noma kwezobuciko, akuyona kuphela esekelwe izici ulimi, kodwa futhi ngqo umsindo senkondlo. Lokhu akusho ukuthi ulwazi oluthile kumele yadluliselwa imilolotelo. Kuyadingeka ukuthi yayithambile futhi enhle, umongozima like izinkondlo.
Yiqiniso, etemibhalo amasu kwezobuciko zihlukile kulezo abantu zisebenzisa ekuphileni kwansuku zonke. Ayengumuntu ofana nathi, njengoba umthetho, ngeke sithathe amazwi, kuyokunikeza out ukuqhathanisa okunjalo, sifanisongco, noma, isibonelo, i-epithet ukuthi uzomsiza ngokushesha sokuchaza noma yini. Ngokuphathelene abalobi, benza sihle, ngezinye izikhathi ngisho yimikhuba kakhulu, kodwa kuphela uma kudingwa umkhiqizo wonkana noma uhlamvu zayo ngazinye ngokukhethekile.
amasu Literary, izibonelo kanye incazelo
reception ukucaciseleka izibonelo
epithet Leli yizwi ichaza into noma isenzo, kuyilapho egcizelela impahla yayo isici. "Indaba ekholisayo-zamanga" (AK UTolstoy)
ukuqhathanisa izinkulumo ezingokomfanekiso ezavela, okuyinto ukuxhuma isihloko ezimbili ezihlukene kunoma yiziphi izici ezivamile. "Hhayi egoba utshani emhlabathini - the ufisa umama nendodana efile"
sifanisongco Isisho ukuthi budluliselwe kusuka entweni eyodwa kuya kwenye isimiso okufana ngaso. Uma le into yesibili engajwayelekile isenzo noma isiphawulo. "I iqhwa aphi" "inyanga ethulula ukukhanya"
ukuzenza ongeyena I isichasiso sinemizwa ezithile, imizwa noma izenzo mayelana nale ndaba, lapho abazange unamathisele. "Ukukhala Sky", "Izulu liyana"
indida Ukugconwa, okuyinto ngokuvamile ivula ephambene nenjongo ngempela. isibonelo esiphelele - "Imiphefumulo Dead" (Gogol)
ibhekisela Sebenzisa izinto umkhiqizo, okuyilapho kwezinye text, isenzo noma namaqiniso angokomlando. Ngokuvamile esetshenziswa izincwadi angaphandle. Russian umbhali ukusetshenziswa ngempumelelo kakhulu ibhekisela Akunin. Ngokwesibonelo, e inoveli yakhe "Izwe lonke - yaseshashalazini" ukuba kutjhiwo weshashalazi "Kubi Liza" (Karamzin)
ukuphindaphinda A igama noma inkulumo liphindwe izikhathi eziningana emshweni lofanako. "Fight, umfana wami, ukulwa, futhi babe amadoda" (Lawrence)
Pun Amazwi ambalwa nje ngesigwebo esifanako, okuyizinto ezifanayo umsindo. "Yena - umPhostoli, futhi mina - mutt" (Vysotsky)
aphorism Umusho omfushane equkethe nje okungaqondile ka eyifilosofi. Okwamanje, steel aphorisms nemishwana imisebenzi eminingi ezincwadini zobuciko. "Rose inuka rose, wavuka ngisho igama it, nakuba kungekho" (Shakespeare)
izakhiwo parallel isiphakamiso Cumbersome, okuvumela abafundi ukwakha inhlangano. Ezisetshenziswa kakhulu ekulungiseleleni ukukhangisa iziqubulo. "Mars. Kuzoba e chocolate"
inkulumo ovikelekile epigraphs Universal, okuyinto ezisetshenziswa zesikole zokubhala Tindzaba. Ezisetshenziswa kakhulu ekulungiseleleni ukukhangisa iziqubulo. "Sizokwenza ukushintsha ukuphila kube ngcono"
ukungcoliswa Ukudweba up yegama elilodwa kusukela ezimbili ezihlukene. Ezisetshenziswa kakhulu ekulungiseleleni ukukhangisa iziqubulo. "Ibhodlela Mangalisayo"
Ngakho, nebugagu betemibhalo zahlukahlukene ukuze ababhali bavela ububanzi ububanzi ukusetshenziswa yabo. Kufanele kuqashelwe ukuthi overreliance kuletincenye ngeke enze umkhiqizo omuhle. Kuyadingeka ukuba baqaphe e ukuzisebenzisa ukuze ngenze ukufunda smooth and soft.
Kufanele ishiwo omunye umsebenzi, okuyinto babe nebugagu betemibhalo. Kuyinto kuphela Ngokuwasebenzisa njalo unable dlweza uhlamvu ezidingekayo ukudala isimo ukuthi oluphakeme kunzima ngaphandle visual effects. Nokho, kulesi simo, musa ubambe ukuze, ngoba lapho indaba ikhula, kodwa nokuzihlukanisa musa abaseduze, umfundi ngokuqinisekile izoqala egijima kakhulu amehlo phambili ukunqanda ngokwakho. Ukuze ufunde indlela masterfully zisebenzisa nebugagu betemibhalo, udinga bajwayelane imisebenzi abalobi asebemazi indlela yokukwenza.